काँग्रेसले प्रदेश नं २ मा सबै उम्मेदवारको टुंगो लगायो, ६ हजार ६२७ जनप्रतिनिधिको चयन हुने ! | suryakhabar.com
Home राजनीति काँग्रेसले प्रदेश नं २ मा सबै उम्मेदवारको टुंगो लगायो, ६ हजार ६२७ जनप्रतिनिधिको चयन हुने !
काठमाडौँ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले आसन्न स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट सबै उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ ।
प्रदेश नं २ का सबै (१३६) तहमा पार्टीको उम्मेदवार टुंगो लगाइएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
सबै तहमा उम्मेदवारको टुंगो लगाइए पनि आज प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति राजधानी बाहिर भएकाले भोलिमात्रै सबै नाम सार्वजनिक गरिने भएको छ ।
Tags: ६ हजार ६२७ जनप्रतिनिधिको चयन हुने !काँग्रेसले प्रदेश नं २ मा सबै उम्मेदवारको टुंगो लगायो
१५ भाद्र २०७४, बिहीबार १५:४५